famerenam-bava volo sy fonosana amina kitapo any China Beyin fonosana
Kitapo fisakafoanana plastika faran'izay tsara OEM
Misy fomba 2 hodinihintsika amin'ny fampiasana kitapo mangatsiaka, 0 ℃ ary ambany 0 ℃. Raha ho an'ireo zavatra mila tazonina ao anatin'ny 0 ℃, ny kitapo mahazatra indrindra dia ho tsara, raha ho an'ny vokatra mila tazonina ambany 0 ℃, dia ilaina ny kitapo mihamangatsiaka. Ny kitapo tsara indrindra dia ny Nylon / Frozen PE.
Kitapo fitehirizana sakafo tsy misy fangarony hafanana
Ny fampiasana tsara indrindra ny kitapo banga dia ny faharetan'ny faharetan'ny vokatra ao anatiny. Raha ara-dalàna raha te hanana lahasa fototra fotsiny ianao dia ho ampy hampiasaina ny PET / vacuum PE, raha maniry ny fitaovana tsara indrindra ianao dia nylon / PE no safidinao. Mazava ho azy, foil dia azo ampiasaina amin'ny kitapo banga.
Kitapo famerenan'ny plastika sakafo OEM
Ny ankamaroan'ny kitapom-batsy dia karazana kitapo banga, mety ho kitapo fisaka na kitapo mijoro, ny ankamaroan'ny kitapo retort dia tsy manana zipper, fa ilaina ny notch-dranomaso.
Kitapo fanaovan-tsakafo ambongadiny China
Matetika ny kitapon-tsakafo dia manangana harona na kitapo fisaka, ary azonao atao koa ny manampy ny varavarankely mazava eo anoloana ny kitapo izay hitan'ny mpanjifa ny tsiranoka ao anaty kitapo. Ary atolotra ny zipper satria afaka manampy amin'ny famerenana ilay kitapo izy io. manitatra ny fiainana fivarotana sy ny freshness ny zava-manitra.